Akwụkwọ ndekọ aha, ndekọ ndekọ azụmaahịa, Ndepụta ndekọ weebụsaịtị weebụsaịtị n'efu
Nke a bụ ndepụta azụmaahịa azụmahịa, ebe ị nwere ike ịnyefe weebụsaịtị gị iji depụta ya n'okpuru otu udi ma ọ bụ ngalaba edemede. Nke a bụ a Free weebụsaịtị Listing directory na-enye gị ohere n'okpuru gị website na Images, Logo, Information, RSS Ụgwọ, wdg
The Listing agụnye ụdị azụmahịa na ndị mmadụ nwere ike na-achọ na otu n'ime ndị kacha na irè ụzọ na-nwere ndị ahịa ahịa gị.
Ngalaba & Sub Categories
R Nkechi T
X Na Z
Lọ oriri na ọuụụ
TV - Redio
Ejiji - Onyinye
Elslọ nkwari akụ
Onweghi - Uru
Akwụkwọ ndekọ aha azụmaahịa na-ezo aka na azụmahịa metụtara ịnye ọrụ na ire ngwaahịa. Nke a na-agụnye kọmputa mmezi ọrụ, website emebe ọrụ, SEO ọrụ, ụgbọala ọrụ, asụsụ nzuzo nkà, SEM na enye ọrụ, wdg
The ndepụta na-agụnye ndị kasị ewu ewu azụmahịa na i nwere ike ịchọ site sorting ha dabeere na mpaghara gị iji chọta ezi ọkachamara .
Mgbasa ozi GOOGLE
Nke a bụ akụkụ dị mkpa nke mgbasa ozi na ịkwalite weebụsaịtị gị. N'ịbụ otu n'ime isi engines ọchụchọ, a na-ahụta Google dị ka igwe nyocha kachasị mma iji nye nsonaazụ ọchụchọ kachasị mkpa maka ndị ọbịa. Ewezuga ịgbaso algorithm dị mgbagwoju anya iji chọpụta ogo nke weebụsaịtị, Google na-enyekwa ndị nwe weebụsaịtị ka ha rụọ ọrụ mgbasa ozi Google. Nke a bụ usoro maka mgbasa ozi n'ịntanetị ma ana-akpọ ya dị ka mgbasa ozi akwụ ụgwọ.
Site na ndepụta azụmahịa anyị, ị nwere ike ịnweta ndị ndụmọdụ nwere ike inyere gị aka na mgbasa ozi mgbasa ozi Google, na-atụtụ mkpụrụokwu kwesịrị ekwesị ma kwalite weebụsaịtị gị n'ụzọ kachasị arụ ọrụ.
BING bụ otu n’ime igwe nchọ ihe dị mkpa nke Microsoft na-akwado. Ọ bụ otu n'ime ndị kasị ewu ewu na search engines na weebụsaịtị mgbe niile ime mgbalị iji kwụọ n'elu a search engine nakwa.
Ugbu a, dịka anyị maara njin ọ bụla na-eso usoro atumatu ma ọ bụ algorithm iji nyefee nhazi ọkwa na weebụsaịtị ọ bụla, ọ dị mkpa na weebụsaịtị gị na-emezu ha niile. Anyị nwere ndị ọkachamara ma ọ bụ ụlọ ọrụ edepụtara na ndekọ anyị nke nwere ike inyere gị aka ebuli webụsaịtị gị ma mee ka ọ dị mkpa maka igwe ọchụchọ wee nweta ọkwa gị dị elu.
Wikipedia bụ free encyclopaedia nke na-enye gị ozi gbasara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọ bụla. Wikipedia mepụtara ibe dị iche maka ihe niile ị nwere ike ịchọ. Ozi sitere na ibe Wikipedia bụ nke ndị ọrụ afọ ofufo gburugburu ụwa mere ma ọ bụ dezie.
Ndepụta ndekọ aha a abụghị naanị usoro iji nyefee weebụsaịtị gị n'ime edemede na ngalaba nkebi ka ị wee nwee ike ịnweta ndị ahịa maka azụmahịa gị, mana ị nwekwara ike ịchọta ndepụta nke azụmaahịa na ndị ọkachamara nwere ike inyere gị aka ịme nke ọma.
Nyefee Ndepụta weebụsaịtị na ndekọ
Nyefee ndepụta saịtị weebụ na ngalaba achọrọ na ngalaba otu nwere ihe oyiyi, ozi ...